မက္ကဆီကိုတိုက်စစ်မှူးဆန်တီယာဂိုမူနော့ဇ်ကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ နယူးကာဆယ် – Play Maker Sports Journal
မက္ကဆီကိုတိုက်စစ်မှူးဆန်တီယာဂိုမူနော့ဇ်ကို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ နယူးကာဆယ်
August 13, 2021 playmaker Sports News 0
ဘောလုံးပရိသတ်တိုင်း Goal! ရုပ်ရှင်စီးရီးကိုကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ယင်း Goal! ရုပ်ရှင်စီးရီးမှာပါဝင်တဲ့မက္ကဆီတိုက်စစ်မှူးလေးဟာနယူးကာဆယ်သို့ပြောင်းရွှေ့ကာဥရောပဘောလုံးခရီးစဉ်ကိုစတင်ပြီးကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နယူးကာဆယ်ဟာဆန်တီယာဂိုမူနော့ဇ်လို့ခေါ်တဲ့မက္ကဆီကိုတိုက်စ်မှူးတစ်ဦးကိုခေါ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Goal! ရုပ်ရှင်စီးရီးမှဆန်တီယာဂိုမူနော့ဇ်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီရထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘက်ဟမ်း၊မိုက်ကယ်အိုဝင်၊ဇီဒန်း၊မက်ဆီ၊ရော်နယ်ဒိုစတဲ့ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားပေါင်းများစွာတို့နဲ့အတူတွဲကစားခဲ့တဲ့ဆန်တီယာဂိုမူနော့ဇ်မဟုတ်ပါဘူး။
မကၠဆီကိုတိုက္စစ္မႉးဆန္တီယာဂိုမူေနာ့ဇ္ကို ေခၚယူလိုက္တဲ့ နယူးကာဆယ္
ေဘာလုံးပရိသတ္တိုင္း Goal! ႐ုပ္ရွင္စီးရီးကိုၾကည့္ဖူးၾကမွာပါ။ယင္း Goal! ႐ုပ္ရွင္စီးရီးမွာပါဝင္တဲ့မကၠဆီတိုက္စစ္မႉးေလးဟာနယူးကာဆယ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ကာဥေရာပေဘာလုံးခရီးစဥ္ကိုစတင္ၿပီးကမာၻ႔ထိပ္တန္းကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
နယူးကာဆယ္ဟာဆန္တီယာဂိုမူေနာ့ဇ္လို႔ေခၚတဲ့မကၠဆီကိုတိုက္စ္မႉးတစ္ဦးကိုေခၚယူလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ Goal! ႐ုပ္ရွင္စီးရီးမွဆန္တီယာဂိုမူေနာ့ဇ္ကိုေခၚယူဖို႔သေဘာတူညီရထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ဘက္ဟမ္း၊မိုက္ကယ္အိုဝင္၊ဇီဒန္း၊မက္ဆီ၊ေရာ္နယ္ဒိုစတဲ့ကမာၻေက်ာ္ကစားသမားေပါင္းမ်ားစြာတို႔နဲ႔အတူတြဲကစားခဲ့တဲ့ဆန္တီယာဂိုမူေနာ့ဇ္မဟုတ္ပါဘူး။
ချစ်ပရိသတ်များကို ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်လာအောင် လုပ်လိုက်တဲ့ ချာလ်တန်စတားဟောင်းမာဒီလိန်းရိုက်
Puskas Award အတွက် သေချာနေတဲ့ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ဂါနာပါရမီရှင်ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်အစွမ်းဖြင့်သွင်းတဲ့ဂိုး
သူနေထိုင်ရာအိမ်ကို ပရိသတ်များ သိသွားမှုကြောင့် အိမ်ပြောင်းပြေးခဲ့ရတဲ့ ဂျက်ဂရဲလ်လစ်ရှ်
ဗြိတိန်ဓာတ်ဆီအကျပ်အတည်းကြောင့် လမ်းဘေးမှာ ဂျယ်ရီပုလင်းနှင့် ဆီဖြည့်နေရတဲ့ ပေါလ်စခိုး
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲများကို အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ဘရာဇီး၊ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကစားရန် ပြန်လည်စီစဉ်လာ
ဗြိတိန်ဓာတ်ဆီအကျပ်အတည်းကြောင့် ဓာတ်ဆီရှာပေးကြရန် ပရိသတ်များကို မီဝေါလ်စတား တောင်းဆို